बलियो रक्सी प्रेम पक्कै पनि उचित पकाउने बनाउँने indifferent रहने छैन। सोही, उत्तरार्द्ध लामो घर मा बनाउन सजिलो छ कि एक क्लासिक पेय रूपमा मान्यता गरिएको छ। तपाईं प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि, तपाईंले केही nuances सामना गर्नुपर्छ, जो को ज्ञान भन्दा साधारण गल्ती जोगिन थियो। आजको लेखमा हामी बनाउँने Braga चामल राख्न कसरी हेर्न हुनेछ।
आफूलाई एक घर उमालेर बनाउनु प्रकट कि सबै भन्दा साधारण कमजोरीहरू को एक, एक्स्ट्रानिअस odors को उपस्थिति छ। त्यसैले आफ्ना उन्मूलन एक प्राथमिकता हुनुपर्छ। Braga गर्न बनाउँने चामल सुगन्धित गरिएका र पुन: उपचार आवश्यकता छैन, यो केही सरल निर्देशन पालना गर्न आवश्यक छ।
सबै को पहिले प्रयोग कन्टेनर को सफाई निगरानी गर्न आवश्यक छ। प्रक्रिया को शुरुवात अघि यो तातो पानी र डिटर्जेंट संग कुल्ला गर्न मनमोहक छ। कि पछि, धूपदान, बोतल र कटोरे ध्यान सफा कपडा संग हटाउन आवश्यक छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण सर्त सबै सिफारिस अनुपात को सख्त उत्सव हो। कि यो निर्भर, के स्वाद विशेषताहरु चामल देखि अर्को उमालेर बनाउनु संग endowed गरिनेछ।
सामाग्री को Mash तयार गर्न आवश्यक
आफ्नै निर्णय गर्नेहरूलाई घटक को आवश्यक सेट आफ्नो निपटान मा छ भनेर पक्का, यो बलियो मादक पेय बनाउन दयालु। तपाईंलाई आवश्यक:
चामल को तीन किलोग्राम।
पानी को 14 लिटर।
MALT को आधा किलो।
संकुचित खमीर 75 ग्राम।
तपाईं बनाउँने चामल देखि एक गुणवत्ता घर-पीसा बियर प्राप्त, तपाईं महंगा अनाज किन्न छैन। यो उद्देश्य लागि, यो amiss सस्तो प्रजातिहरू छ। को MALT सन्दर्भमा, यो स्टार्च क्षरण को प्रक्रिया मा भाग। बिना यो किण्वन सुरु हुनेछ।
पूर्व-धोए चामल पानी एघार लिटर, उम्लिरहेको गर्न गरम र कम गर्मी मा उसिनेर हालिएको छ। यो प्रक्रियाको अवधि 45 मिनेट छ। यो सबै समय, यो समय देखि पैन सामग्रीहरू हलचल गर्न समय महत्त्वपूर्ण छ। को thickening मिश्रण यो पानी को एक सानो भाग हालिएको छ रूपमा। फलस्वरूप, एक homogeneous gruel, 70 डिग्री गर्न शांत गर्न अनुमति गर्मी देखि जो हटाइएको छ र प्राप्त गर्नुपर्छ।
चावल इच्छित तापमान गर्न cooled सम्म, तपाईं MALT गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कीमा बनाएको र पानी लीटर संग मिश्रित। परिणामस्वरूप समाधान chilled चामल वजन मा हालिएको थियो र 65 डिग्री गर्न गरम छ। न्यानो मिश्रण प्लेट र कम्बल र्याप जोगिन पनि तीव्र ठंडा हटाइयो।
आठ घण्टा पछि, समाप्त wort किण्वन पछि गरिनेछ जो एक कचौरा, मा हालिएको छ। त्यहाँ पनि पानी लीटर र खमीर को आवश्यक मात्रा पठाउनुहोस्। सबै राम्ररी मिश्रित र बन्द गर्ने हाइड्रोलिक वाल्व सेट द्वारा।
कन्टेनर, चामल को अर्को उमालेर बनाउनु राखिएको छ जो, न्यानो गाढा ठाउँमा हस्तान्तरण। प्रक्रिया को अन्त को effervescence को समाप्ति न्याय गर्न सकिन्छ। साथै, घर-पीसा बियर एक हल्का रंग र तीतो स्वाद प्राप्त हुनेछ। अन्तिम चरण मा, यो सबै साना कणहरु को छुटकारा प्राप्त गर्न, र distilled फिल्टर छ।
वैकल्पिक: सामाग्री को सेट
यो मैलेंगा मा चामल यस नुस्खा उमालेर बनाउनु को तयारी एक बरु असामान्य स्वाद छ उल्लेख गर्नुपर्छ। एक साँच्चै बलियो पेय छ, तपाईंले सबै आवश्यक घटक संग अग्रिम शेयर गर्न आवश्यक छ। तपाईंको भान्सा यो गर्न त्यहाँ हुनुपर्छ:
किसमिस को 400 ग्राम।
भङ्ग चामल एक गिलास।
मैलेंगा को आधा लीटर।
brewer गरेको खमीर को 200 ग्राम।
purified पानी 12 लिटर।
वास्तवमा पकाउन घरमा चामल रक्सी खींचना यो पहिलो नजर मा जस्तो हुन सक्छ भन्दा धेरै सजिलो छ। यो सबै सिफारिस अनुपात पालना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो, तपाईं किसमिस गर्न आवश्यक छ। यो पानी हालिएको र पन्ध्र मिनेट उसिनेर छ।
को prefab कन्टेनर, चामल राखिएको, मैलेंगा किसमिस र brewer गरेको खमीर cooled। त्यहाँ पनि चीनी सिरप खन्याउन। सबै राम्ररी मिश्रित र तीन वा चार दिनको लागि न्यानो ठाउँमा तिनीहरूलाई राख्नु।
यो समय पछि किण्वित पदार्थ भरिएको ट्यांक purified पानी बाह्र लिटर खन्याइन् र अर्को दिन को लागि छोड्ने थियो। त्यसपछि, समाप्त Braga फिल्टर र distilled।
खमीर भगवा बिना चामल को बनाउँने
गैर-मानक नुस्खा अनुसार तयार पेय उत्कृष्ट स्वाद अलग छ। र यसको उत्पादन लागि कुनै पनि असामान्य उत्पादनहरु आवश्यकता छैन। यस मामला मा, घटक प्रयोग गरिनेछ:
भगवा तीन किलोग्राम।
moonshine नौ लिटर।
भङ्ग चामल को 750 ग्राम।
माथिको देखि यो mediocre स्वाद छ कि साधारण खाद्य पदार्थ को एक सूची छ, तपाईं बलियो मूल पेय प्राप्त।
सबै को पहिलो तपाईं चामल गर्न आवश्यक छ। यसको एक yellowish रंग भगवा संग संयोजन र रक्सी खींचना हालिएको दिन तला। परिणामस्वरूप मिश्रण संग एक कन्टेनर पछि किण्वन लागि न्यानो स्थानमा पठाइएको छ।
जो सामान्यतया बारेमा पाँच वा छ दिन लाग्छ यो प्रक्रिया, को समाप्तिमा, तरल फिल्टर र distilled थियो। परिणाम चामल को एक एकदम बलियो उमालेर बनाउनु छ।
यो पेय चामल को अलि कति आशय संग हल्का स्वाद छ। यसलाई बनाउनको लागि, तपाईंलाई आवश्यक:
अनाज को आधा किलोग्राम।
पानी7लिटर।
ड्राई खमीर को 8 ग्राम।
पूर्व-धोए चामल, हालिएको छ पानी पाँच लिटर, को प्लेट पठाइएको छ आधा एक घण्टा को लागि एक फोडा ल्याइएको र उबला छ। यो समयमा, यस croup पूर्णतया तयार हुनुपर्छ। चामल 65 डिग्री गर्न cooled र कीमा बनाएको अग्रिम Grinder हरियो MALT संग मिश्रित Seethe।
परिणामस्वरूप ठूलो एक कम्बल मा र्याप र saccharification लागि छोड्न छ। छ घण्टा पछि, खमीर पहिले न्यानो पानी एउटा सानो मात्रा मा भंग, मिश्रण मा थपियो, र किण्वन पठाइएको थियो। यो प्रक्रिया औसत अवधि बारेमा पाँच दिन छ। परिणामस्वरूप Braga प्रमुख प्रदूषक को हटाउनु गर्न फिल्टर मार्फत पारित, र त्यसपछि डबल distilled। तयार उमालेर बनाउनु 40 डिग्री गर्न पतला छ। अनुरोध मा, यो एक कार्बन फिल्टर घर पास गर्न तीन पटक हुन सक्छ।
रेड वाइन को सबै भन्दा राम्रो प्रजातिहरू
"Torres" रक्सी (Torres)। स्पेनी मदिरा: नाम, समीक्षा
उज्बेकिस्तान: मुद्रा, देश र राम्रो-neighborly सम्बन्ध को आर्थिक अवस्था
दबाइ आवश्यक आवश्यक: गुण र आवेदन
नीलो लहर सुइट होटल4* (टर्की, Alanya): संख्या को विवरण, फोटो, सेवा,
पेरूमा विदेशीको आमा वास्तवमा के वैज्ञानिकहरू भेटिए
Brondirovanie बाल - यो के हो? यो फेसन प्रवृत्ति!
पछाडि र कसरी मुखासे तिनीहरूलाई छुटकारा प्राप्त गर्न